Rubha Roller, Rubha Chisanganiso, Rubha Sefa - Simba
Jinan Simba Rubber Roller Equipment Co, Ltd. inyanzvi inogadzira yemazuva ano rabha roller michina inosanganisa kutsvagisa kwesainzi uye kugadzira.Verenga Zvakawanda
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira: Rubber Roller Stripping Machine, CNC Kukuya / Grooving Machine, CNC Cylindrical Grinder, Rubber Roller Kuvhara Mashini, Etc. Verenga Zvakawanda
Kana iwe uchishuvira pane chero chedu zvinhu zvinoteera iwe unoona yedu yezvigadzirwa runyorwa, ndapota inzwa wakasununguka kutaura nesu nekuda kwekubvunza. Uchakwanisa kutitumira maemail ...Verenga Zvakawanda
Jinan Simba Rubber Roller Equipment Co, Ltd
Kwemakore makumi maviri apfuura, kambani haina kungo pedzera simba rayo rese kuR & D nekugadzirwa kwemidziyo, asi zvakare ichiramba ichiongorora hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji.
Simba Rubber Roller
Mumakore achangopfuura, kambani yedu iri kuita mupiro kune akangwara kugadzira mune yerabha roller indasitiri. Iyo Indasitiri 4.0 modhi inozoiswa mune yedu yerabha roller kugadzirwa munguva pfupi iri kutevera.
Rabha Roller CNC Yakakwira Precision Cylindrical Gr ...
Yakatangwa muna 1998
Jinan Simba Rubber Roller Equipment Co, Ltd. inyanzvi inogadzira yemazuva ano rabha roller michina inosanganisa kutsvagisa kwesainzi uye kugadzira. Umbwa muna 1998, kambani ndiyo huru hwaro kugadzirwa anokosha michina rabha rollers mu China. Kwemakore makumi maviri apfuura, kambani haina kungo pedzera simba rayo rese kuR & D nekugadzirwa kwemidziyo, asi zvakare ichiramba ichiongorora hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira: Rubber Roller Stripping Machine, CNC Kukuya / Grooving Machine, CNC Cylindrical Grinder, Rubber Roller Kuvhara Mashini, Rubber Roller Polishing Machine, Professional Kuyera Instrument, Etc.
Jinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co, Ltd. inonyanya kugadzirwa kwerabha chinotenderera michina, ine simba rekugadzira chiyero. Nesimba rakasimba rehunyanzvi uye akapfuma akaunganidza ruzivo, ese marudzi emidziyo akave akabvumirana kuzivikanwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Izvo zvigadzirwa zvakatengeswa kune dzinopfuura makumi maviri nyika kutenderera pasirese kusanganisira United States, Germany, South Korea, South Africa, neBrazil. Panyaya yehunhu, tekinoroji, uye ruzivo, Jinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co, Ltd. yave mutungamiri muirabha roller michina indasitiri uye iri padanho repasi rose.
Zvigadzirwa zvakagadzirwa nekambani zvinosanganisira: otomatiki rabha roller yekumonera uye yekuvhara muchina, yakakosha irabha roller lathe grinder, yakawanda-inoshanda CNC cylindrical grinder, yakakosha laser detector yerabha roller uye yakakosha yekugeda musoro werabha roller. Izvo zvigadzirwa zviri pamusoro zvakahwina zvisere zvemunyika kana zvematunhu zvigadzirwa mibairo uye matatu esainzi kutsvagisa kubudirira mibairo muShandong Province. Muna 2002, chigadzirwa chakapfuura kuongororwa kweCCIB Quality Center uye ISO9001: 2000 yenyika yepamusoro system certification. Muna 2013, yakagamuchira rutsigiro rwakakosha rwekutsvagisa kwesainzi uye tekinoroji uye kusimudzira muShizhong District, Jinan, ndokutanga kumisikidza rabha roller roller michina yekugadzira tekinoroji nzvimbo. Uchishandisa zvishandiso zvedu, makambani anogona kuvandudza zvakanyanya kugadzirwa kwekugadzira, kugadzirisa chigadzirwa, kuchengetedza mari, uye kuunza mabhenefiti akakura kune vashandisi.
Iyo kambani inoomerera kunheyo ye "mutengi kutanga", yakagadzira uye yakaburitsa mhando dzakasiyana dzerabha roller zvigadzirwa zvekugadzira, izvo zvakagutsa uye zvakakunda rumbidzo kubva kune vashandisi. Iyo kambani ichagadzira yakakura hupfumi mabhenefiti evashandisi zvikamu zvine yakanaka nyanzvi mufananidzo, yemhando yepamusoro sevhisi, yakanakisa tekinoroji, uye zvine musoro mitengo.